Azịza dị mkpirikpi banyere Microstation - Geofumadas
Azịza dị mkpirikpi banyere Microstation
Nọvemba, 2007 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Ebe Google Analytics na-ekwu na enwere ndị ọrụ AutoCAD na-ajụ maka nke a, lee ụfọdụ azịza ngwa ngwa. A na-eme arụmọrụ ndị a niile site na Microstation, ọ bụ ezie na e nwere ụzọ iji mee ya na bọtịnụ ma ọ bụ iwu akara (isi na) anyị ga-eji ngwọta menu.
1 Esi esi na Microstation (dgn) nyefee AutoCAD (dxf ma ọ bụ dwg)?
Njikwa / chekwaa dika /
Iji mee ya na oke ego ma ọ bụ na nsụgharị dị iche iche: ọrụ / batrị mgbanwe
2 Esi emeghe faịlụ AutoCAD na Microstation (dxf ma ọ bụ dwg)?
Njikwa / mepee (abanyela na ibubata ya)
Buru n'uche na dị ka ọkwa dị iche iche na-apụta, nsụgharị Microstation nwere ike ma ọ bụ nwere ike ghara imepe ha.
Microstation 95 nwere ike imeghe faịlụ ruo AutoCAD 98
Microstation SE ruo AutoCAD 2000
Microstation j ruo AutoCAD 2002
V8.5 Microstation nwere ike imeghe ka AutoCAD 2007
Microstation V8 XM ruo AutoCAD 2009
Microstation V8i Họrọ 2 XSUMX ruo AutoCAD 2012
Microstation V8i Họrọ 3 2013 na AutoCAD 2014, hụkwa ihe usoro a gụnyere na AutoCAD 2015 na AutoCAD XNUMX.
3 Esi esi kwatuo ihe oyiyi na Microstation (ecw, bmp, jpg, tiff, png wdg)?
Njikwa / raster faili / faịlụ / itinye ... (ọtụtụ nwere ike ibu)
Na-arụ ọrụ nke ọma na Image Manager
Ekwusila ike, ọ dịghị akwado img
4 Esi gbanwee usoro nke ihe oyiyi na microstation?
Njikwa / raster njikwa / faịlụ / chekwaa dịka…
Maka ajụjụ maka ọdịda lee ebe a
5. Kedu esi mepee faịlụ akụkọ ihe mere eme?
Ngwaọrụ / imewe akụkọ ihe mere eme
6. Esi emeghe mkpụrụ ndụ?
Ụdị / mkpụrụ ndụ
Ịbubata mkpụrụ ndụ n'ime blocks lee ebe a
7. Kedu esi ede ma ọ bụ gụọ njikwa UTM?
Iwu ike (dika isi)
utiteies / igodo na / x, y = coordinatex, nhazi, na / tinye
Iji hụ otú esi bipụta ha site na excel Ana m akọwa ya ebe a
Ịhụ otú e si agụ ma ọ bụ aha Ana m akọwa ya ebe a
8 Esi esi bubata faịlụ .shp (shapes) na Microstation?
File / import / shp / choose file / choose scale / choose range / choose option to import data or just vector / họrọ nhọrọ iji bubata ụdị ma ọ bụ linestrings / mbubata
A na-eme nke a na Geographics, na-emepụta ọrụ mpaghara
9 Kedu ka esi hụ faịlụ mxd, nhazi ma ọ bụ ArcGIS ka ọ dị na Microstation?
Njikwa / raster / họrọ nhọrọ GIS / MXD-lyr
Na-eburu ya dị ka ihe oyiyi, ị nwere ike ijikwa transparencies, na agba ị na-ahụ bụ mxd
A na-eme nke a na Geographics, ị ga-arụrịrị ikike ikikere ArcGIS ka ịlele na imeghe dbf data
10. Microstation nwere ike ịgbanwe ihe raster na .ecw usoro?
Mba. Can nwere ike ịgụ foto raster ma gbanwee ya na usoro ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na usoro a bụ nkeonwe ma na-ewepụta ya chọrọ ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ nke nwere Erdas ugbu a.
Emela ihe nwute ... ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, tufuo ya.
Previous Post«Previous Ijikọta map na Google Earth
Next Post Ozi kachasị mma gbasara SQL Server ExpressNext »
11 Na-aza "Azịza dị mkpirikpi banyere Microstation"
April, 2019 na
Direct, microstation - Excel. Mba, belụsọ ma ị mere ngwa VBA.
You nwere ike idetuo ederede na Excel na mgbe ị na-Tapawa ya họrọ ‘jikọtara’ ma ọ bụ ‘embed’. Dị ka enwere ngwa dị ka mgbanwe na-enye gị ohere ụfọdụ nke ahụ.
Ma nsogbu nke ime nnyocha site na microstation ka faịlụ ahụ dị oke na-adịghị adị dịka ọrụ.
Site na mmepe VBA ma ọ bụrụ na o kwere omume, mgbe ahụ ị nwere ike ịme njikọ dị n'etiti faịlụ dgn na table teepu, inwe ike ịchọ n'okpuru ndetu, dị ka ịchọ nọmba map dị na tebụl, ịchọta ya, wdg.
Ọ dị mma, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na microstation, enwere m ike ịchọpụta na-akpaghị aka ma họrọ okwu ma ọ bụ nọmba site na listi Excel (nke nwere ihe ụfọdụ 1000), kama ịchọ ha n'otu n'otu na akwụkwọ microstation.
Carlos Bejar kwuru, sị:
July, 2016 na
Daalụ maka ozi ahụ ..
Ekwetaghị m na usoro nọ ọdụ. Shouldkwesịrị ịchekwa ya n'ụdị nke SmartPlan ghọtara, dịka ọmụmaatụ DWG, wee mepee ya na mmemme ahụ.
Usoro, faịlụ - chekwaa dika ...
Ezi ehihie .. ekele m.
Isiokwu ndị na-atọ ụtọ nke ukwuu bipụtara na ibe gị.
M na-edetara gị akwụkwọ iji mee ajụjụ na-esonụ:
Enwere m ike mbupụ 3D MicroStation V8i .dgn faịlụ ka .sat ndọtị ozugbo ??? Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m otu esi eme ya, mgbe ahụ faịlụ ahụ na .sat ndọtị ga-eji na SP3D (SmartPlan Modeling).
Ana m ege ntị n'okwu gị.
Ndewo Felipe, ikwesiri ịkọwa ihe ị na-ekwu karịa site na iwere dgn maka ndozi. Ka anyị lee ma anyị nwere ike inyere gị aka.
Felipe Ballesteros kwuru, sị:
Agaghị m echeta otu esi enweta map ka m ziga ya na nhazi m na-eme usoro dum ma anaghị m enweta
November, 2011 na
Echere m na ọ bụ ihe, jikọtara na ndekọ abụọ na nchekwa data.
Ọfọn, mbupụ ya ka ọ bụrụ ọdịdị faịlụ, n'ebe ahụ ị na-akpọ PostGIS.
Na Geographics, File / Export / GIS
Na Bentley Map, ọ bụ otu, naanị ịmepụta ọpụpụ ọhụrụ ma họrọ ịtinye shp
Manuel Flores kwuru, sị:
Friend ihe m na-agwa gị bụ otú m nwere ike ime ka a akara eriri nke akpa nkata mmewere rụsịrị ejikọrọ abua ndekọ na nchekwa data Access ka exsportarlo ka postgis ka shp format enweghị adịkwa ọmụma ndia mere na na post gis na pịa na-ele log item linestring
Ihe ị ga - eme bụ mbupụ ha na nhọrọ:
Njikwa / mbupu / shp
n'otu ụzọ ahụ ka m kọwara na nke a: mgbe ọ na-ekwu maka otu esi bipụta data site na shp ka Microstation
Achọrọ m ịma otú m ga-esi nyefe faịlụ nchịkwa na microstation geographic na oru ngo nke usoro ọdịdị ArcGis kamakwa ihe ọmụma nke nchekwa data (Nweta) n'ụzọ dị otú ahụ na ihe mmewere na abụọ mslink nwere ike iji anya nke uche hụ ya na tebụl nke Njirimara ArcGis
Inventor Nastran Agụmakwụkwọ
Autodesk Inventor Nastran bụ usoro ịme anwansị dị ike ma sie ike maka nsogbu injinia. Nastran bụ injin ...